Ivato sy Ambohitrarahaba – Loza tamin’ny moto: zandary iray, vazaha iray sy ny olon-tiany namoy ny ainy | NewsMada
Ivato sy Ambohitrarahaba – Loza tamin’ny moto: zandary iray, vazaha iray sy ny olon-tiany namoy ny ainy
Par Taratra sur 30/12/2019
Faran’ny taona tsy ialan-doza ! Lehilahy teratany vahiny sy ny olon-tiany nandeha moto no maty nidofotra tamin’ny andrin-jiron’ny Jirama teny Ivato. Zandary iray nandeha moto ihany koa namoy ny ainy teny Ambohitrarahaba.
Maty tsy tra-drano ilay lehilahy teratany vahiny sy ny olon-tiany, omaly tokony ho tamin’ny 6 ora maraina teny Ivato. Nidofotra tamin’ny andrin-jiron’ny Jirama ireo mpitondra moto tamin’izany. Vokany, nitsirara tamin’ny tany izy ireo. “Mbola nahahetsika ilay vehivavy taorian’ny loza, fa ilay vazaha kosa maty teo no ho eo”,hoy ireo nanatri-maso. Nambaran’ny zandary misahana ny famotorana fa anisan’ny nahatonga ny loza ny fandehanana mafy. Nohamafisiny tamin’izany fa nalalaka ny fifamoivoizana tamin’io fotoana io ka mety mbola mamon’ny torimaso izy ireo. Tsy nahafehy ny familiana intsony rehefa teo amin’ny “rond point” Bani iny. Nentina avy hatrany teny amin’ny HJRA ireo niharam-boina saingy namoy ny ainy nandritra izany ilay vehivavy 28 taona. Efa vatana mangatsika kosa no tsapa tamin’ilay teratany vahiny, manodidina ny 50 taona .
Niely tamin’ny tambajotran-tserasera arak’izany ny fitadiavana ny fianakavian’izy ireo ary heno tamin’ny ora farany fa nisy namany nanatona teny amin’ny tobin’ny zandary eny an-toerana. Fantatra ihany koa fa monina eny Ivato ihany, ireo niharam-boina.
Tranga hafa teny Ambohitrarahaba
Moto iray nentina zandary sy lehilahy iray ihany koa nifandona tamina fiara tsy mataho-dalana iray hihazo an’i Sabotsy Namehana, ny alin’ny zoma hifoha asabotsy teo, tsy lavitry ny tobin-tsolika Ambohitrarahaba. Namoy ny ainy teo no ho eo ilay zandary nitondra ny moto raha naratra mafy kosa ilay lehilahy niaraka taminy. Nambaran’ny zandary misahana ny famotorana fa nentina namonjy fitsaboina tao amin’ny Polyclinique Ilafy avy hatrany ilay niharam-boina ary efa tsy ahina ny ainy. Fantatra fa nogiazana avy hatrany ilay fiara ary tazomina ao amin’ny tobin’ny zandarimarian’Ankadikely kosa ny mpamily hatao fanadihadiana.
Fiara nivarina an-kady tany Ambavatapia
Ankoatra izany, taksiborosy nivarina an-kady, ny alin’ny zoma teo, teny Ambavatapia, Ambositra RN7. Nivadika tanteraka ny fiara ka voa mafy ny mpamily sy ireo mpandeha tao amin’ny seza faharoa aoriany. “Tsy nandeha mafy ny mpamily fa mety ho torimaso fotsy no nitarika ny loza”, hoy ireo mpandeha. Soa fa tsy nisy ny aina nafoy nandritra ny loza.
Araka izany, nisesisesy ny lozam-pifamoivoizana amin’izao mialoha ny faran’ny taona izao.